[APK] Pixel Launcher2ကို အသုံးပြု၍ ROOT Google Assistant ကိုဖွင့်ထားပါ Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, APK, Android application များ, လဲ tutorial
ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များ၊ Youtube မှတ်ချက်များနှင့်မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာမေးသောကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုပို့စ်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံတွေ့ရသည် ကြီးထွားလာ Androidsis Telegram အသိုင်းအဝိုင်း, ပြီးတော့ဒီကွန်ရက်အားလုံးမှာမင်းကိုခေါ်လာဖို့မင်းကိုတောင်းဆိုနေတယ် Google Pixel2၏ဗားရှင်း APK ဗားရှင်းတွင် မည်သည့် Android terminal ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်၎င်းသည်ယုတ္တိနည်းသော Google Pixel မဟုတ်ပါ။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကြက်ဥကိုထည့်ပြီးတယ်လီဂရမ်ရှိ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့ညမှာ ထိုအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး သည် Google Pixel Launcher2၏နောက်ဆုံးပေါ် APK ကို Google Assistant ကိုမူလမြင်ကွင်းမှဖွင့်ပေးခဲ့သည် ညာဘက်ကိုသာပွတ်ဆွဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Vicente Jimenez.
1 မည်သည့် Android တွင်မဆို Google Pixel Launcher2၏ APK ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Download APK Google Pixel Launcher2No ROOT Google Assistant Enabled
မည်သည့် Android တွင်မဆို Google Pixel Launcher2၏ APK ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များ
Vicente Jiménezကိုဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ယူခဲ့သောနေရာမှမည်သည့်ရင်းမြစ်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ မူလမြင်ကွင်းမှ Google Assistant Enabled ဖြင့် Google Pixel Launcher2APKငါသာသင်ပြောနိုင်ပါတယ် APK သည်လုံခြုံပြီး malware ကင်းပါသည် ဒါ့ကြောင့်သင်ဟာကမ္ဘာကြီးအားစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ဖြင့်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်သည် APK ၏ဇာစ်မြစ်ကိုမသိသောသို့မဟုတ် Google Pixel Launcher2၏ဤဆိပ်ကမ်းသည်မည်သည့် Android ဗားရှင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ဗားရှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်အကြောင်းကြားနိုင်မည်နည်း။ ငါသည်သင်တို့ကို apk ထည့်သွင်းနိုင်သည့် Android ၏ဗားရှင်းသို့မဟုတ်ဗားရှင်းနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်မပေးနိုငျသညျ.
Yo Android 7.0 နဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာသဟဇာတဖြစ်မှာပါ ငါသေချာပေါက်မပြောနိုင်သေးသောကြောင့်၎င်းကိုသင်ပြောပြပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းကိုကူးယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ပြီးမည်သည့် Android ဗားရှင်း၌၎င်းကိုသင်မျှော်လင့်ထားနိုင်ကြောင်းပြောပြပါ။
ထို့ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာ Setting / Security menu မှမသိသောရင်းမြစ်များကိုဖွင့်ထားပါ၊ သို့မှသာသင်သည် APK ပုံစံဖြင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကို Google Market မှတူညီသောပြင်ပ application များဖြစ်လာသည်။
Download APK Google Pixel Launcher2No ROOT Google Assistant Enabled
မသန်စွမ်း Google Pixel Launcher2No Root ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Telegram ၏ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းတွင် Vicente Jiménezမှမျှဝေသည်သင်ဘယ်လိုသွားရမလည်း Androidsis အုပ်စုကိုသွားပါ အဲဒီမှာကတည်းကသင်ကလိမ်သို့မဟုတ်ကတ်ထူပြားမပါဘဲတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်များအတွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်၊ Telegram ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုငြင်းဆန်ရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်လိုသူမည်သူမဆိုအတွက်၊ လူအနည်းငယ်ကသာအနည်းငယ်သာသိလျှင်၎င်းသည်ယခု Mark Mark Zuckerberg ကပိုင်ဆိုင်သောလျှောက်လွှာနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသောကြောင့်၎င်းသည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ရှိသော WhatsApp ကိုစတင်လိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားသည်။ မင်းကိုငါခွင့်မပြုခဲ့ဘူး၊ ငါမင်းကိုဒီမှာထားခဲ့တာပဲ ပြင်ပမှ Telegram သို့ apk ကို download လုပ်ရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်.
ဒီ Pixel Launcher2No Root apk ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာကိုပြတာအပြင်ဒီ post ရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာလည်း Google Pixel Launcher2သည် Xiaomi Mi A1 တွင်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသခဲ့သည်, ပုံမှန်အားဖြင့် Launcher3မှလာသည့် Launcher သုံးပြီးကတည်းက Launcher ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသည်များစွာရရှိသည်။ သူ၌စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] Pixel Launcher2ကို အသုံးပြု၍ ROOT Google Assistant ကိုဖွင့်ပါ
သင်ညွှန်ပြသော download ကိုတိုက်ရိုက်ရယူခြင်းမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားသောအခါမိုဘိုင်းကကျွန်ုပ်အားဗိုင်းရပ်စ်သတိပေးသည်
Sony Z3 Android 6.0.1 တွင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအမှားကတော့ led screen နောက်ခံကိုကျွန်ုပ်တိုက်ရိုက်မပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Galaxy S8 အကွာအဝေးမှာအရောင်သစ်ကိုရရှိသည်။ burgundy red